InnJoo InnWatch 2, SmartWatch gbara gburugburu ma dị ọnụ ala | Akụkọ akụrụngwa
Taa, anyị na-ewetara gị Actualidad Gadget nyocha zuru oke banyere elekere elekere nke na-eju anya n'ọtụtụ akụkụ. Nke mbụ bụ na anyị na-ahụ elekere mgbanaka, ya mere ọ na-adọrọ mmasị nke ọma, n'aka nke ọzọ, ọ bụ elekere akụ na ụba, nke anyị nwere ike ịchọta n'ọtụtụ mkpọ na ọnụ ọnụ ọnụ, na nke ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọ bụ na-ekiri na ọtụtụ ndakọrịta. InnWatch 2 nwere ike ịmekọrịta nha anya na ngwaọrụ gam akporo na ngwaọrụ iOS, nke na-enye anyị ohere iji ohere zuru oke nke InnJoo smartwatch nke abụọ, ihe ọ bụla ama anyị nwere. Characteristicsdị njirimara atọ a mere ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche n'ụdị ya, mana ha abụghị naanị ike ya, na nyocha a, anyị ga-agwa gị ihe ọma niile na-adịghị mma nke elekere a dị egwu.
1 Ọ dị okirikiri na ejiji
2 Atụmatụ na atụmatụ ndị ọzọ
3 InnWatch 2 interface na iji
4 Akụrụngwa na ngwugwu ngwugwu
Ọ dị okirikiri na ejiji
N'ezie, nke a bụ nke mbụ n'ime atụmatụ ya kachasị mkpa, InnWatch 2 bụ elekere gburugburu, yiri Motorola Moto 360 na ike ọgwụgwụ, ma na njirimara na arụmọrụ nke na-enweghị ihe ọ bụla ga-enwe anyaụfụ nke ikpeazụ, ebe ọ bụ na InnWatch 2 na-esonyere nsụgharị gbanwere nke gam akporo Wear nke na-eme ka ọ kwekọọ na ngwaọrụ gam akporo na ngwaọrụ iOS.
Ọzọkwa, dị ka ngwaọrụ ọ bụla na-asọpụrụ onwe ya n'oge na-adịbeghị anya, InnWatch 2 A na-enweta ya na ahịhịa nwere agba atọ kachasị mma, ụdị ọla edo, ụdị isi awọ gbara ọchịchịrị na ụdị ọla ọcha. Ihe niile na-esonyere mgbaaka akpụkpọ anụ, nke aka ya na nguzogide ya na-aga nke ọma, ị nwere ike ịnwe ekele maka ụdị ihe a na ngwaọrụ nke ga-eso nkwojiaka gị ụbọchị niile ma yabụ chọrọ ogologo oge. Ikekwe, anyị nwere ike ịhapụ ịgbanwee eriri ahụ n'ụzọ dị mfe karị, ebe ọ bụ na agbanyela ya n'okpuru efere ahụ, nke na-ele ya anya na mbụ, ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume ịgbanwe.
A na-eji ụlọ igwe anaghị edozi ụlọ, yana ihe igwe eji eme ihe na ngwaọrụ. Azụ azụ bụ nke plastik ma na-agụnye ihe mmetụta nha pulsation. Na mgbakwunye, n'azụ ya nwere ihe ndọta nke na-eme ka ọ dị mfe ịkwado ya n'ụzọ dị mfe. Eriri eriri ahụ dabara n'ụzọ ziri ezi iji dabara nkwojiaka niile, yabụ ụmụ nwanyị nwekwara ike iyi InnWatch 2 na-enweghị nsogbu ọ bụla doro anya.
Atụmatụ na atụmatụ ndị ọzọ
Anyị ga-eme nyocha dị mkpirikpi banyere ọrụ niile nke InnWatch 2, dịka anyị kwurula, ha niile dakọtara maka gam akporo na iOS, na nke na-abụghị nke a, ga-egosipụta n'ụzọ ziri ezi. N'ebe ahụ ka ha na-aga:
Nlekọta ụra; zuru ezu na kpochapụwo ụra nlekota oru ngwa na isi egosi.
Pedometa; ọ na-agụ usoro ndị ahụ nke ọma, kwenye n'oge eji ngwaọrụ ahụ, ma mekọrịta ha na ngwaọrụ gam akporo ma ọ bụ iOS. Anyị nwekwara ike ịgbakwunye ihe mgbaru ọsọ nke usoro a rụrụ.
Pulsometer; N'iji teknụzụ nwere ihe mmetụta abụọ na-emebu, ọ ga-atụle nha obi gị. Na ule ọ dịla irè ma zie ezi. Ọ na-arụ ma na-echekwa ọnụ ọgụgụ nke pulsations anyị.
Onye na-ege ihe na-ege ntị; obere nchekwa ya anaghị enye anyị ohere ịchekwa ihe karịrị nkeji ise nke ọdịyo.
Ime obodo; na-enye anyị ohere ịse foto n’emetụghị ekwentị aka.
Loss mara: nche ga-eme mkpọtụ ma gbanye mgbe ngwaọrụ ahụ gafere n'ime oke anyị setịpụrụ.
Music playback na njikwa; Anyị nwere ike ịkpọ egwu na ụda site na ama anyị na InnWatch 2, ma ọ bụ naanị ịchịkwa ọdịyo nke na-akpọ.
Google Ugbu a na Siri akara site na ngwa, ekele ya igwe okwu.
Nkọwa site na mmegharị, ọ ga-enye anyị ohere ịgafe na interface na-enweghị imetụ ya aka, na-eme obere mmegharị nke nkwojiaka.
.Nata nkwuputa, n'ụzọ dị irè na ngwa ngwa, anyị nwere ike ịnata ọkwa ma site na ụda na ịma jijiji ma ọ bụ ha abụọ, a ga-agụ ngwa ngwa nke ọkwa ahụ, oge na ọdịnaya.
Nata na ịkpọ oku ekwentị na-enweghị aka, site na ọkà okwu elekere na igwe okwu.
Onwe ngwa dị ka mgbako, mkpu na kalenda.
Anti sedentarism mara; Ọ ga-agwa anyị oge ọ bụla ịkwaga, na ebumnuche nke ịkwalite ahụike nke ndị umengwụ.
InnWatch 2 interface na iji
InnWatch 2 nwere interface na-emegharị ka ọ nwee ọdịdị ya, ya na ọdịnaya Spanish, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ ụfọdụ, ihe na-ezughi oke na-egosi na ntụgharị. Anyị nwere ike ịhọrọ n’etiti elekere asaa dị iche iche, akara ngosi akara ngosi abụọ na akwụkwọ ahụaja dị iche iche atọ, ọ bụ ezie na ọ dị nwute na enweghi ohere ịgbakwunye akwụkwọ ahụ aja nke anyị, ndị dị adị na-arụ ọrụ nke ọma ma maa mma.
Ọdịdị ya dị iche iche na-enye anyị ohere iji ya nke ọma na ọnọdụ ndị na-enwu gbaa, na mgbakwunye, a na-enwu enyo nke ọma ka ọ ghara isiri anyị ike ịgụ. Ọ na-aza mmegharị ahụ nke ọma, naanị bọtịnụ ya na-arụ ọrụ dị ka bọtịnụ menu, na-enye anyị ohere ịhapụ ọrụ niile na otu aka, yana mmetụ abụọ ihuenyo ga-agbanyụ. Iji ọrụ ya niile Naanị anyị ga-enyocha koodu nke gosipụtara na ngwa QR gị ma ọ ga-eduzi anyị na Playlọ Ahịa Google Play ma ọ bụ iOS AppStore ibudata ihe kwekọrọ na ngwa maka n'efu. N'ime ngwa ya, anyị nwere ike ịlele data nke pedometer, nyocha obi obi yana ọkwa anyị ga-enweta.
Njirimara onye ọrụ ahụ dị mfe, ọ dabere na ịpị akara ngosi, na-agagharị ma ọ bụ ala na menu, aka nri ma ọ bụ aka ekpe n'ime ọrụ iji gaa n'ihu ma ọ bụ azụ. Naanị bọtịnụ o nwere na-eme ka ojiji ya dị mfe ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, wee jiri ọpịpị abụọ mee ngwa ngwa duga anyị na mgbochi.
Na mgbakwunye, n'ihi ohere ọ ga-emepe igwe okwu ya na iwu olu ya, anyị ga-ama akụkụ nke ama anyị ruo ugbu a anyị amaghị, n'ihi na uru ọ bara ịme ajụjụ ma ọ bụ izipu ozi site na Siri naanị site na ịrịọ ya ka elekere enweghị atụ. Ọbụna anyị nwere ike iji ndu GPS, ebe ọ bụ ezie na a gaghị egosipụta ya na ihuenyo ahụ, enwere ike iji elekere dị ka onye natara ụda ngwaọrụ ahụ, yabụ ọ ga-eduzi anyị na ọdịyo.
Akụrụngwa na ngwugwu ngwugwu
Ọ nwere nhazi MTK2502, ya na 128MB na 32MB RAM nchekwa dị n'ime. Ngosipụta 1,22-inch, 240 × 204-pixel dị oke ruru eru yana 2,5D capacitive touchscreen. N'aka nke ọzọ, batrị 230mAh na-enye ruo ụbọchị atọ nke nnwere onwe na iji ya eme ihel enyocha na ụgwọ na-mere site ya inductive magnetik chaja.
Dị ka mgbakwunye ọ nwere igwe okwu, ndị ọkà okwu na nyocha ụda obi. Ọ na-arụ ọrụ site na Bluetooth 3.0 na 4.0 LE, nke na-eme ka batrị batrị pere mpe na ngwaọrụ abụọ. Na ngụkọta arọ nke gram 56 na-enweghị eriri. Ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ na-adịghị mkpa, ọ na-esiri ike ịchọta ngwaọrụ ndị yiri ya, nke na mgbakwunye inwe inwe mmetụ aka nwere ike ịdịgide karịa ụbọchị abụọ, na InnWatch 2 na-eme ha na-enweghị nsogbu.
Ihe ngwugwu nwere:
Igbe InnWatch 2
Akwụkwọ ntuziaka na Bekee
USB USB - Igwe Ọdụdọ na-eche nche
Nlekere InnWatch 2
Atọ na-echebe ihe nkiri
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwaọrụ yi » InnJoo InnWatch 2, a SmartWatch gbara gburugburu ma dị ọnụ ala [Nyocha]
Ahem… Na price?
Ndewo Francisco. Have nwere ya na atụmatụ ọnụahịa
Site na € 89 ị nwere ike ịchọta ya na Amazon, ruo € 120 na TuTiendaMóvil
Zaghachi Miguel Hernández
Daalụ. Ndo, amataghị m. Ekele.
Nke a bụ Nintendo Direct nke November